Hayyuu diinagdee: ''Fooyya'insa sharafa biyya alaa irratti taasifametu qaala'insa gatii fide'' - BBC News Afaan Oromoo
11 Caamsa 2018
Guddina diinagdee saffisaa akka galmeessitu kan himamuuf Itoophiyaan gabaasa diinagdee biyyoota Afrikaa Dhaabbanni Maallaqa Addunyaa(IMF) baaseen biyya liqaa guddaan irra jiru akka taate beeksiseera.
Hangi liqaa biyyattiirra jiru omisha waliigalaa biyyattii keessaa harka 56.2 akka ta'e gabaasichi eereera.
Dhaabbatichi hangi liqaa biyyattiira jiru yaaddessaadha jedhuyyuu, hayyuun qonnaa fi diinagdee kan ta'an Dr. Damis Caanniyaalew liqaan akka rakkootti ilaalamuu hin qabu jedhu.
Akka fakkeenyaattis Ameerikaan biyya liqaan jiraattudha jechuun ibsu.
''Liqaa fudhachuun waan ajaa'ibaa miti. Guddinni kamuu sochii liqaarraa bilisa ta'een hin deemsifamu. Inni guddaan liqaan fudhatame maal irra oola isa jedhudha.''
Mootummaan Itooophiyaa akka biyyoota Afrikaa tokko tokkoo hojjettotaaf mindaa kaffaluuf hin liqeeffatus jedhan.
Itoophiyaan kan liqeeffattuu piroojektoota gurguddoo ijaaruuf akka ta'e kan himan Dr. Damis, IMF fi Baankiin Addunyaa ijaarsa bu'uraalee misoomaaf liqaa oolu biyyootaaf hin kennan jedhu.
''Hojiilee daandii, ijaarsa hidhaaleef, babaldhina annisaa ifaaf, tajaajila telekominikeeshinii walgeessisuuf, daandii baaburaa diriirsuufi kanneen kana fakkaataniif Itooophiyaan liqaa kan fudhattu Chaayinaa fi Indiyaa irraati,'' jedhu Dr. Damis.
Liqaan kan madaalamuu qabu dandeettii liqaa san deebisuu wajjiini. Maallaqa sana fayyadamanii galii argachuun fi liqaa sana yeroo jedhametti deebisuun hanga danda'ametti wanti nama yaaddessu hin jiru jedhu hayyuun kuni.
Bu'uura kanaan Mootummaan Itoophiyaa maaliif liqeeeffate yaada jedhu hin qabus jechuun himu.
Sharafni doolaara Ameerikaa dabaluun qaalayinsi gabaa akka jiraatu sababa ta'eera. Kunis dhiibbaa dhaabbilee maallaqaa idila addunyaan ta'uu himu.
kanaanis jiraattotni komii qabaachuu dubbatu.
''Wantoota nyaataaf oolan irratti gatiin dabaleera. Rakkinichi isa ji'a darbeerras hammaataadha. Meeshalee ijaarsaa irrattis daballiin jiraachuun jireenyi keenya qormaata akka ta'u taasiseera,'' jedhu jiraattuu magaala Finfinnee kan ta'an Aadde Sablee Isheetee.
Hayyuun diinagdee Dr. Damis akka jedhanitti, fooyya'insa sharafa biyya alaa irratti taasifame sirrii miti .
Hammi bituu qarshii xiqqaachuun dhiibbaa akkami qaba?
''Qaala'insa gatii hin eegamne akka fiduu danda'u mootummaan dursee hubatuu qaba ture.''
Gabaasni IMF akka ibsutti meeshaalee garaagaraa irratti gatiin guyyaa guyyaan dabalaa jira.
Dubbii guddaan garuu haala kana akkamiin to'achuun danda'ama kan jedhu akka ta'es Dr. Damis eeraniiru.
Meeshaalee biyya alaatii galanii fi biyya keessatti omishaman adda baasuun to'annoon taasifamuu qabas yaada jedhu qabu.